Tsy misy hetsika manohitra ny fanamelohana ilay mpisera Afgana ho faty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2019 3:34 GMT
Mpianatra ho mpanao gazety tao amin'ny Oniversiten'i Balk ao Mazar-i Sharif i Sayed Parwez Kambakhsh. Nolazaina fa naka tahaka nandika ny lahatsoratra iray avy ao amin'ny tranonkala Iraniana nitsikera ny toeran'ny finoana Islamo momba ny fihetsika manoloana ny vehivavy izy, ary nilaza ny eritreriny manokana momba izany – tahaka ny fanaon'ny bilaogera. Nanadihady azy noho izany ny sampam-pitsikilovana Afghana, ary nanameloka ho nanimbazimba fivavahana ny fitsarana tao amin'ny faritanin'i Balkh sy nanameloka azy ho faty taorian'ny fisamborana azy.
Notsikerain'ny mpitsara azy manokana i Kambakhsh nandritra ny fiakarany fitsarana farany indrindra, araka ny voalazan'i Jean MacKenzie tao amin'ny IWPR :
Niovaova fitantanan-draharaha Afghana maromaro ny lehiben'ny fitsarana Abdul Salam Qazizada. Efa ela izy no tao amin'ny fitondrana Taliban, ary hita miharihary ny fifanoheran-keviny amin'ny voampanga …
Nandritra ny fotoam-pitsarana, toa nandray ny andraikitry ny mpampanoa lalàna i Qazizada fa tsy toy ny mpitsara tsy mitongilana ka nirotsaka nifanandrina ara-pitsarana tamin'ilay mpisolovava mpiaro Mohammad Afzal Nooristani. Raha tsy nanana ilay maritoa kely iny izy dia ny peniny no nakapokapony matetika tamin'ny mikrô mba hampiatoana ny fiarovan'i Nooristani ny olona arovany.
Imbetsaka ny mpitsara no nanafika an'i Kambakhsh, izay nipetraka malok'endrika saingy tony teo amin'ny sezan'ny voampanga.
“Mba lazao ahy hoe nahoana ianao no nanao ireo zavatra ireo,” hoy hatrany i Qazizada. “Inona no antony nanosika anao hanao izany?”
“Tsy afaka manome antony anao aho, satria tsy nanao na inona na inona,” hoy i Kambakhsh namaly.
Voalaza fa voadaroka i Kambakhsh hatramin'ny nigadrany voalohany tamin'ny volana Desambra 2007, kanefa efa sitrana ny ankamaroan'ny mariky ny ratrany noho ny fotoana lava be nangatahana hanaovana fanadihadiana. Na dia nilaza aza izy fa meloka dia nanamafy fa nilaza izany noho ny fanerena.
Voampanga ho diso tamin'ny fitondran-tena ara-môraly ihany koa i Kambakhsh toy ny fametrahana fanontaniana maro tao am-pianarana, fisarihana ny saina sy ny fikatsahana laza, tsy fahalalam-pomba, ary ny mandefa vazivazy maloto amin'ny findainy.
Miatrika olana marobe i Kambakhsh: tsy nandinika ny antontan-taratasy momba ny raharahany ny mpisolovava mpiaro azy, na dia herinandro talohan'ny hiakarany fitsarana voalohany aza, ary nanambara ny fanohanan'izy ireo ny famonoana azy ny Efitra Ambony ao amin'ny Parlemanta, niaraka tamin'ireo mpitondra fivavahana mpandala ny nentin-drazana sy ireo zokiolona ara-poko.
Tamin'ny taona 2006, voaheloka ho faty noho ny fiovany ho Kristiana i Abdul Rahman. Avotra ny ainy rehefa, teo ambanin'ny tsindry mafy iraisam-pirenena , nambaran'ny fitsarana fa adala izy ary nalefa tany Italia. Tsy mbola hita loatra tao amin'ny raharaha mikasika an'i Kambakhsh ny tsindry iraisam-pirenena toy izany: tsy hita nandritra ny volana maromaro tao amin'ny fampahalalam-baovao iraisampirenena ny tantaran'ny raharaha itsarana azy na dia nisy aza ny filazana mampiahiahy fa raharaha valifaty noho ny asan'ny rahalahiny niaraka tamin'ny IWPR izany.
Jereo ny sary mampihetsi-po mampiseho ny polisy Afghana nitondra an'i Sayed Parwez Kambakhsh taorian'ny fiakarany fitsarana tao Kabul tamin'ny 18 mey 2008 ao amin'ny tranonkalan'ny dailylife